RASMI: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Xidiga Ree Uruguay Ee Koobka Aduunka Wacdaraha Ka Soo Dhigay Ee Lucas Torreira. – GOOL24.NET
RASMI: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Xidiga Ree Uruguay Ee Koobka Aduunka Wacdaraha Ka Soo Dhigay Ee Lucas Torreira.
Kooxda Arsenal ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay xidiga ree Uruguay ee Lucas Torreira kaas oo wacdaro ka soo dhigay intii uu xulkiisa ku matalayay koobka aduunka. Kooxaha Arsenal iyo Sampdoria ayaa hore heshiis uga sii gaadhay iibka Lucas Torreira wuxuuna hadda si rasmi ah u noqday ciyaartoy Arsenal ah.
Lucas Torreira ayaa isku soo muujiyay kooxdiisii hore ee Sampdoria ka hor intii aanu si wayn indhaha ugu soo jiiday bandhigii uu ka sameeyay kulamadii xulka qarankiisa Uruguay ay koobka aduunka ka soo ciyaareen gaar ahaan kulamadii Russia iyo Portugal.
Markii ay Arsenal dhamaystirtay heshiiska Lucas Torreira waxaa dareenkiisa ka hadlay macalinka Gunners ee Unai Emery wuxuuna yidhi: ” Lucas Torreira waxaanu kula soo saxiixanay ciyaartoy da’yar ah kaas oo hibo aad u ifaysa ciyaaraha ku leh. Waa khadka dhexe oo tayo badan leh, waxaan ku raaxaystay daawashada bandhigiisii Sampdoria ee labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay isla markaana waxaynu aragnay wixii aadka u fiicnaa ee uu Uruguay uga sameeyay koobka aduunka”.
Unai Emery oo ka sii hadlaya saxiixa Lucas Torreira ayaa yidhi: ” Waa ciyaartoy da’yar ah oo haddaba khibrad fiican leh, laakiin kaas oo doonaya in uu koritaanka sii wato. Waxaanu Lucas ku soo dhawaynaynaa Arsenal waxaananu wanaag ka rajaynaynaa in uu si deg deg ah noogula soo biiri doono kulamada xili ciyaareedka ka horeeya”.
Lucas Torreira ayaa waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay kooxaha dalkiisa Uruguay isaga oo intii aanu ku soo biirin kooxda horyaalka Talyaaniga ee Sampdoria ka soo ciyaaray kooxda Montevideo Wanderers iyo Pescara wuxuuna kulankiisii ugu horeeyay ee Pescara saftay May 2015 kii isaga oo 19 sano jir ahaa.
Lucas Torreira ayaa kooxda Sampdoria ku soo biiray July 2015 kii wuxuuna ugu danbayn ka noqday xidig muhiim ah iyada oo Unai Emery uu si wayn farxad uga muujiyay in Lucas Torreira oo uu bandhigiisa ku soo raaxaystay labadii xili ciyaareed ee ugu danbayay uu kooxdiisa ku soo dhaweeyay.
Ugu danbayn Lucas Torreira ayaa loo gacan galiyay lamarka 11 aad ee Gunners wuxuuna hadda u bixi doonaa fasax uu ka qaadan doono koobkii aduunka ee uu ulkiisa Uruguay uga soo ciyaaray Russia isaga oo kooxda Gunners la midoobi doona horaanta August.